Rayson | i-outlet kamatilasi wasentwasahlobo
Rayson e Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo eyinhloko Isingeniso Esingcono Kakhulu Isilawuli seshaja yelanga sekhwalithi ephezulu QE 004 Ifektri iRayson FactoryPrice-Rayson
Ukuhlolwa kukhombisa ukuthi kungavumela futhi kulula ukuyisebenzisa nokuyinakekela.
I-Rayson Global Co., Ltd iyinhlangano ehlanganyelwe yeSino-US, eyasungulwa ngo-2007 etholakala eShishan Town, eFoshan High-Tec.
Rayson e Rayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Imikhiqizo Eyinhloko Isingeniso Esingcono Kakhulu Isilawuli seshaja yelanga sekhwalithi ephezulu QE 004 Ifektri iRayson FactoryPrice-Rayson Rayson
iphakathi kwezitholakala kakhulu namuhla.
Kusukela yasungulwa, iRayson ihlose ukuhlinzeka ngezixazululo ezivelele nezihlaba umxhwele kumakhasimende ethu. Sisungule eyethu i-R&D isikhungo sokuklama umkhiqizo nokuthuthukiswa komkhiqizo. Sithembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende iphephile futhi iphilile. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi okwengeziwe mayelana yethu, sishayele ngqo. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazogada inqubo ngayinye ukuze baqinisekise ikhwalithi yomkhiqizo.
Yiziphi izindlela zokukhokha ozamukelayo? I-LC lapho ibonwa / nge-TT, i-30% yediphozi kanye nebhalansi engu-70% iphikisana namakhophi amadokhumenti okuthumela i-witinin izinsuku zokusebenza ze-7. Ngingawathola kanjani amasampuli? Ngemva kokuqinisekisa ukunikezwa kwethu futhi usithumelele izindleko zesampula, sizoqedela isampula phakathi kwezinsuku eziyi-15-20. Ungacela inkampani esheshayo ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumelela inombolo ye-akhawunti ye-DHL, i-FedEx noma i-UPS, singakuthumelela isampula nge-akhawunti yakho.Ngingakwazi yini ukuvakashela imboni yakho? Yebo, siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu nganoma yisiphi isikhathi, siseduze nesikhumulo sezindiza samazwe ngamazwe sase-Guangzhou Baiyun, kuthatha ihora elilodwa nje ngemoto, futhi singahlela imoto ukuthi ikulande.
Ngamandla aqinile e-R&D namandla okukhiqiza, uRayson manje usephenduke umkhiqizi ochwepheshile nomphakeli onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu ehlanganisa i-vi spring mattress outlet yakhiwe ngokusekelwe ohlelweni oluqinile lokuphatha ikhwalithi kanye namazinga omhlaba. isitolo sikamatilasi wasentwasahlobo we-vi Namuhla, uRayson uklelisa phezulu njengomhlinzeki oqeqeshiwe nonamava embonini. Singaklama, sithuthukise, senze, futhi sidayise uchungechunge oluhlukene lwemikhiqizo ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende ezihlanganisa ukwesekwa kobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q&A. Ungathola okwengeziwe ngomkhiqizo wethu omusha we-vi spring mattress outlet kanye nenkampani yethu ngokuxhumana nathi ngokuqondile.Kuphephe kakhulu ukugqokwa. Ngoba ayinazo izinsalela zamakhemikhali eziyingozi ezingase zicasule noma zibe yingozi empilweni kwabayigqokile.